ပဋ္ဌာန်းဆက်ဆိုသည်မှာ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on May 10, 2020 at 9:58am
အတိတ်ဆက် အဟိတ်ဆက် အကြောင်းအကျိုးဆက်တာကို ပြောခြင်တာပါ ။
လူသား နင့် လူသား ၊ လူသားနင့် နတ်ဒေဝါ ၊ လူသားနင့် မမြင်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ် ။ လူသား နင့်
သတ္တဝါ တမျိုးမျိုး ချစ်ခင် ရင်းနှီးမူ ။ ယိုင်းပင်းကူညီမူ ၊ အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဖေးမမူ ။ အပြန်ပြန်အလှနလှန် စောင့်ရှောက်မူ ၊လက်တွဲ ခေါ်ယူမူ ၊ ခံစားနားလည်ပေးနိူင်မူ၊ စသည့် သဘောတရားများ
ဟာ ကောင်းကျိုးကို ဦးတည်တဲ့ ပဌာန်းဆက် သဘောတရားတွေပါဘဲ ။
တဦး နင့် တဦး မြင်တာနင့် ကြည့်မရ ၊ အသံကြားမရ ၊ ကောင်းကွက်မမြင် အပစ်တင် စသညိ့ ဆိုးကျိုးကို ဦးတည်သည့် ပဌာန်းဆက်လည်း ရှ်ိတတ်ပါတယ် ။ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လို့
ရတဲ့ ပဌာန်းဆက် ရှိသလို ဝမ်းနည်းစွာဘကြည့်နေလိုက်ရတဲ့ ပဌာန်းဆက် မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ပဋ္ဌာန်းဆက် ဆိုတိုင်း ကိုယ်လိုရာ ဆွဲတွေးလို့ မရပါဘူး ။ သဘောတရား ညီညွတ်ဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ် တဦး နင့် တဦး တွေ့ရ. မြင်ရ. ပြောရ အတူတကွ အလုပ်လုပ် ကြ ။ အတူတကွ ကုသိုလ်ပြုကြ ၊ သာသနာ ပြုကြတာလည်း ပဌာန်း ဆက်ပါဘဲ။ ပဌာန်းဆက်သဘောက. ကျယ်ဝန်းလှပါတယ်။
အတူတကွ ပြုခဲ့ဘူးသော ရေစက် ပန္နက်ခဲ့ဘူးသော သစ္စာကလည်း ထူးခြားတဲ့ ပဌာန်းဆက်ပါဘဲ။ တဖက်သော သူက ဘယ့်လောက် အနိူင်ကျင့်ကျင့် စီးပိုး စီးပိုး ၊ ဘယ်လောက် အခွင့်အရေးယူယူ ကျေနပ်စွာ ပေးဆပ်နေတာလဲ ပဌာန်းဆက်ပါဘဲ။
တခါတရံ အံ့သြဖို့ ကောင်း လောက် အောင် ထူးခြားလေးနက် သွား တာလည်း ရှိပါတယ်။
မိမိ အတွက် ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားဘဲ အရာရာကို ပေးဆပ်ရဲတဲ့ သတ္တိမျိုးရှိတဲ့ ပဌာန်းဆက်မျိုးလည်း ရှ်ိပါတတ်ပါတယ် ။
ခြုံငုံပြောရရင် ပဌာန်း ဆက် အစစ်အမှန်ဆိုတာ ယေဘူယျအားဖြင့် ဒီလို ရှိတတ်ကြပါတယ်။
၁။ အတူ တကွ ကုသိုလ်ပြုလိုခြင်။
၂။ မျှဝေ ခံစား နားလည်တတ်ခြင်း။
၃။ မိမိကြောင့် စိတ် အဆင်းရဲ မခံလိုခြင်း။
၄။ ဒုက္ခရောက်မှာ မလိုလားခြင်း ။
၅။ မိမိ ၏ ပူပင်သောက ကို မသိစေလိုခြင်း။
၆။ အခွင့်အရေး မယူတတ်ခြင်း။
၇။ ဘဝ နေထိုင်မူ ပုံစံ တိုးတက်မြင့်မားတာကို မြင် လိုခြင်း။
၈။ မိမိ ပဌာန်းဆက် ၏ ကောင်းသတင်းကိုသာ ကြားလိုခြင်း။
၉။ မိမိ ပဌာန်းဆက် ၏ အကျိုးမဲ့ကို မပြုလိုခြင်း။
၁၀။မိမိ ပဌာန်းဆက် ၏ အတင်းအဖျင်း ပြောဆိုမူကို မလိုလားခြင်း ။
၁၁။ မိမိ ပဌာန်းဆက် ၏ စီးပွားရေး လူမူရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး များကို စိတ်ဝင်စားခြင်း
( အကျိုးမဲ့ စပ်စုခြင်းမျိုးမဟုတ်)
၁၂။ မိမိ ပဌာန်းဆက် ၏ စိတ်သဘောထား အခြေ အနေ ။ ဘာသာရေး ယုံကြည်သက်ဝင်မူ ။
ကုသိုလ်ပြုမူကို အလေးထား၏။ ကူညီ၏။
၁၃။ ဘဝ ပျက်ခဲ့သည့်တိုင် တည့်မတ်ပေး၏။ လက်တွဲခေါ်ယူ၏။
ယခုတင်ပြခဲ့သော အချက်ထက်လည်း များနိူင်၏။ အဆိုပါ အချက်များမှ တခုခု ချွတ် ယွင်းခဲ့လျှင် ကောင်းကျိုးလိုလားသော ပဌာန်း ဆက်မဖြစ်နိူင်ပါ။ သို့သော် ကောင်းသောအကြံဥာဏ်လိုလား၍ မိမိ၏ ပူပင်သောကကို ပြောပြနေခြင်းမှာ အပူပေးခြင်းမဟုတ်။ စိတ်သက်သာလို၍ အားကိုးအားထားပြုလို၍ ဖြစ်၏။ ချွင်းချက်ဖြစ်၏။
သိုက်ဆက် ၊ ပဋ္ဌာန်းဆက် ၊ ဘဝဆက် ။ ။
သိုက်ဆက်များသည် သိုက်နန်းအတွင်းမှ ကတိကဝတ်များဖြင့် လူပြည့်သို့ သာသနာပြုရန် ရောက်ရှိလာကြသော ဘုမ္မိယအနွယ်ဝင် သိုက်နန်းရှင်များဖြစ်ကြသည် ။
ပဌာန်းဆက်များသည် သိုက်နန်းရှင်များ နှင့် အရင်ဘဝကသော်လည်းကောင်း ယခုဘဝမှသော်လည်းကောင်း
မိဘ ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ၊ သားသမီးအဖြစ် တော်စပ်ခဲ့ဖူး၍ သိုက်နန်းအတွင်းမှ သိုက်နန်းရှင်များ က စောင့်ရှောက်ကြသော လူသားများဖြစ်ကြသည် ။
ဘဝဆက်ဆိုသည်မှာ သာသနာပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သိုက်နန်းအတွင်းမှ လူ့ပြည်သို့ရောက်လာကြပြီး လူ့ပြည်တွင်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံ ကြီးမားလွန်းသောကြောင့် သိုက်နန်းအတွင်းသို့ မပြန်ရတော့ဘဲ လူဘဝကိုသာ တစ်ဖန်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသွားသော သာသနာပြုသူများ ဖြစ်ကြသည် ။ ။
စိတ်​​လေးသလိုလို ​ကြက်​သီးထသလိုလို ​ကြောချမ်းသလိုလို သည်​ ပထမအဆင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
နတ်​ဝိဇ္ဇာများက ဆက်​သွယ်​ရန်​ကြိုးစား​သော်​လည်း မိမိသမာဓိက အားနည်း​သေးသဖြင့်​ ဆက်​သွယ်​မရ​သေးပါ။
ဘေးဖြစ်​မဲ့လမ်းဆို စိတ်​​လေးပြ။ ကံ​ကောင်းမှာဆို ထူးခြား​သောနိမိတ်​ပြ။ နာမ်​​လောက​​ တစ်စုံတစ်ဦး ရောက်​လာလျှင်​ ကြောစိမ့််​ပြသည့်​ ပထမအဆင့်​သာဖြစ်​ပါတယ်​။
ဂုဏ်​​တော်​ပွားတာ တရားထိုင်​တာ အား​ကောင်းလာလျှင်​ နတ်​ဝိဇ္ဇာများက အိပ်​မက်​ဖြင့်ဆက်​သွယ်​နိုင်​​သောအဆင့်​ ​ရောက်​လာပါတယ်​။
အဓိဋ္ဌာန်​ဝင်​ဖို့ အိပ်​မက်​​ပေးတာ ​ရှေ့ဖြစ်​မှာကို ကြိုတင် အိပ်​မက်​​ပေးတတ်​ပါတယ်​။
ပုဂ္ဂိုလ်​ သမထအစ အိပ်​မက်​ကလို့ ​ပြောရပါမယ်​။
အာနာပါ သမထအစ နိမိတ်​ကလို့​ပြောရပါ့မယ်​။
အိပ်​မက်​​ပေးတာကို ခွဲခြားတတ်​ဖို့လိုပါတယ်​။ နယ်​​စောင့်​နတ်​လို နတ်​က​ပေးတာလား။
မြနန်းနွယ်​တို့လို သိုက်​က​ပေးတာလား ​စစ်​တတ်​ဖို​လိုပါတယ်​။
လမိုင်းက နတ်​ဝိဇ္ဇာအ​ယောင်​​ဆောင်​ပြီး လိမ်​လည်​ အိပ်​မက်​​ ပေးတတ်​ပါတယ်​။
မသုံးသပ်တတ်ရင် မစစ်​တတ်​ရင်​ အိပ်​မက်​ခိုင်းတာ ​လျှောက်​လုပ်​၊ အိပ်​မက်​နဲ့မခိုင်း​ရင်​ ဘာမှမလုပ်​နဲ့ ဘာမှမလုပ်တတ် ခြာခြာလည်​တတ်​ပါတယ်​။
အိပ်​မက်​မှန်​သမျှ အတည်​ယူလို့မရဘဲ ကိုယ်​ပိုင်​ အသိဥာဏ်​သာ အဓိက ဖြစ်​ပါတယ်​။
အကြားဓာတ်​နဲ့ အမြင်​ဓာတ်​ သတ်​သတ်​စီ လာတတ်​ပါတယ်​။
အကြားဓာတ်​​ပေါ်ရင်​လည်း နတ်​ဝိဇ္ဇာ ​သိုက် ​ပြိတ္တာ နာမ်​​လောကရဲ့ စကား​ပြောသံ​တွေ ကြား​နေရတတ်​ပါတယ်​။
အမြင်​ဓာတ်​​ပေါ်ရင်​လည်း ဒီသစ်​ပင်​မှာ ဘာရှိတာကအစ သိပြီး လူတ​ယောက်ကို ​ကြည့်​လိုက်​တာနဲ့ သူ့ကိုယ်​​စောင့်နတ်​ အ​စောင့်​အ​ရှောက်​​တွေကအစ မြင်​​နေရတတ်​ပါတယ်​။
သမာဓိအား အလွန်​​ကောင်းမှ အကြား အမြင်​၂ခုလုံး ပြိုင်​​ပေါ်​နေတတ်​ပါတယ်​။
ကိုယ့်​​ရှေ့မှာ ဘိုးမင်း​ခေါင်​ တင်​ပလ္လင်​ချိတ်​​ ဆေးလိပ်​​သောက်​ပြီး စကား​ပြော​နေတာကို သက်​ရှိထင်​ရှားလို
အကြားအမြင်​စစ်​စစ်​ အဆင့့်ဟာ နတ်​ဝိဇ္ဇာ​တွေနဲ့ အပြန်​အလှန်​ စကား​ပြောလို့ ရတဲ့အဆင့်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
သမာဓိအား​ကောင်းချိန်​မှာသာ ရတတ်​ပြီး သမာဓိ​အားနည်းချိန် ​ပြုတ်​ကျသွားတတ်​ပါတယ်​။
ဒါကို အကြားအမြင်​ ဆက်​တိုက်​ရ​နေသလိုလိုနဲ့ ဆက်​လုပ်​​နေရင်​ လူ​တွေကို လိမ်​ညာ​​နေတာသာ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ဓာတ်​လိုလို နတ်​လိုလို ဘိုး​တော်​​ယောင်​​ယောင်​​လို့ အ​ပြောခံရတတ်​ပါတယ်​။
ဘိုးဘိုး​အောင်​ ဘိုးမင်း​ခေါင်​ ဘိုးဝါယမ​တို့လို သိဒ္ဓိ(၁ဝ)ပါးအဆင့် မ​​ရောက်​ဘဲနဲ့ ဘိုး​တော်​ဝိဇ္ဇာ အမည်​
​ယောဂီအဆင့် အကြားအမြင်​​​ယောင်​​ယောင်​​လေးနဲ့ ဘိုး​တော်​လုပ်​​နေတာဟာ ဘိုး​တော်​လိမ်​များသာ
ဖြစ်​ပါတယ်​။​ သိဒ္ဓိ(၁ဝ)ပါး​ပေါက်​တဲ့ ဘိုး​တော်​အစစ်​​တွေက ရှားသွားပါပြီ။
ဒါ​ကြောင့်​ နတ်​ဝိဇ္ဇာ​တွေနဲ့ တကယ်​အဆက်​အသွယ်​ရတယ်​ဆိုရင်​ သမထလမ်းစဉ်​ ဝိဇ္ဇာလမ်းစဉ်​
ညွန်​ကြားပြသတဲ့ ဆရာသမားမျိုး နဲ့​ တွေ့တတ်​ပါတယ်​။ တွေ့လို့ လမ်းစစ်​လမ်းမှန်​​ လျှောက်​နိုင်​တဲ့သူက
လမ်း​ချော်​သွားရင်​ ချဲဂဏန်း​လာက်​​လေး​ပေးနိုင်​ရုံ ကြားသလို မြင်​သလိုလိုနဲ့ ​လောဘသမား​တွေခြံရံတဲ့
အဆင့်​နိမ့်သမထ​လောက်​နဲ့ လမ်းဆုံးတတ်​ပါတယ်​။ အာ​ဘောင်​အာရင်းသန်​တဲ့ အကြွားဘိုး​တော်​အဆင့်​နဲ့ ဘိုး​တော်​အတုကို ဘယ်​နတ်​ဝိဇ္ဇာမှာ မ​လေးစားပါဘူး။​
နောက်​ဆုံး ညာစားပါများရင်​ နတ်​ဝိဇ္ဇာ​တွေနဲ့ ဆက်​သွယ်​နိုင်​တဲ့ အဆင့်​ကတောင်​ ပြန်​​လျှောကျသွားတတ်​ပါတယ်​။
အဘိညာဉ်​မှလွဲရင်​ အားအ​ကောင်းဆုံးအဆင့်​ လို့​ပြောနိုင်​ပါတယ်​။ ထိုင်​ရာမထ စကား​ပြောရင်းနဲ့ နတ်​ဝိဇ္ဇာ​တွေနဲ့ အချိန်​မ​ရွေး ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါတယ်​။
အထက်​နတ်​​ ​အောက်​နတ်​ ဗြဟ္မာအထိ မ​နောခြင်းဆက်​စကား​ပြောနိုင်​ပါတယ်​။
စကား​ပြောတယ်​လို့​ဆိုပေမဲ့ စိတ်​ချင်း​ပြော စိတ်​ချင်းနားလည်​တဲ့ အဆင့့်ထိ​ရောက်​သွားပါတယ်​။
ဝိဇ္ဇာ​တွေနဲ့ စိတ်​ချင်းဆက်​သွယ်​ပြီး အချိန်​မ​ရွေး အလုပ်​လုပ်​ရတတ်​ပါတယ်​။ စိတ်​ချင်းဆက်​သွယ်​နိုင်​တဲ့အဆင့်​ကလည်း တကယ်​ပါရမီရှင်​​တွေမှ ရတတ်​ပါတယ်​။
တကယ်​သာသနာချစ်​ပြီး တရားကျင့်​မှလည်း နတ်​ဝိဇ္ဇာ​တွေက ချစ်​ခင်​​လေးစားပြီး စိတ်မ​နောချင်းဆက်​သွယ်​နိုင်​တဲ့ အဆင့်​​ ရောက်​တတ်​ပါတယ်​။
အားလုံးသာသနာကို ချစ်​ခင်​မြတ်​နိုးပြီး တရားကျင့်​နိုင်​ကြပါ​စေ​ကြောင်း ဆုမွန်​​ကောင်း​တောင်းလိုက်​ရပါတယ်​။
credit to ပုပ္ပါး ဦး​အောင်​ဓမ္မသိဒ္ဓိ
အတိတျဆကျ အဟိတျဆကျ အကွောငျးအကြိုးဆကျတာကို ပွောခွငျတာပါ ။
လူသား နငျ့ လူသား ၊ လူသားနငျ့ နတျဒဝေါ ၊ လူသားနငျ့ မမွငျအပျသော ပုဂ်ဂိုလျ ။ လူသား နငျ့
သတ်တဝါ တမြိုးမြိုး ခဈြခငျ ရငျးနှီးမူ ။ ယိုငျးပငျးကူညီမူ ၊ အပွနျပွနျအလှနျလှနျဖေးမမူ ။ အပွနျပွနျအလှနလှနျ စောငျ့ရှောကျမူ ၊လကျတှဲ ချေါယူမူ ၊ ခံစားနားလညျပေးနိူငျမူ၊ စသညျ့ သဘောတရားမြား
ဟာ ကောငျးကြိုးကို ဦးတညျတဲ့ ပဌာနျးဆကျ သဘောတရားတှပေါဘဲ ။
တဦး နငျ့ တဦး မွငျတာနငျ့ ကွညျ့မရ ၊ အသံကွားမရ ၊ ကောငျးကှကျမမွငျ အပဈတငျ စသညိ့ ဆိုးကြိုးကို ဦးတညျသညျ့ ပဌာနျးဆကျလညျး ရှိတတျပါတယျ ။ ပွုပွငျ ထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျလို့
ရတဲ့ ပဌာနျးဆကျ ရှိသလို ဝမျးနညျးစှာဘကွညျ့နလေိုကျရတဲ့ ပဌာနျးဆကျ မြိုးလညျး ရှိတတျပါတယျ။
ပဋ်ဌာနျးဆကျ ဆိုတိုငျး ကိုယျလိုရာ ဆှဲတှေးလို့ မရပါဘူး ။ သဘောတရား ညီညှတျဖို့ ခကျခဲတတျပါတယျ တဦး နငျ့ တဦး တှရေ့. မွငျရ. ပွောရ အတူတကှ အလုပျလုပျ ကွ ။ အတူတကှ ကုသိုလျပွုကွ ၊ သာသနာ ပွုကွတာလညျး ပဌာနျး ဆကျပါဘဲ။ ပဌာနျးဆကျသဘောက. ကယျြဝနျးလှပါတယျ။
အတူတကှ ပွုခဲ့ဘူးသော ရစေကျ ပန်နကျခဲ့ဘူးသော သစ်စာကလညျး ထူးခွားတဲ့ ပဌာနျးဆကျပါဘဲ။ တဖကျသော သူက ဘယျ့လောကျ အနိူငျကငျြ့ကငျြ့ စီးပိုး စီးပိုး ၊ ဘယျလောကျ အခှငျ့အရေးယူယူ ကနြေပျစှာ ပေးဆပျနတောလဲ ပဌာနျးဆကျပါဘဲ။
တခါတရံ အံ့သွဖို့ ကောငျး လောကျ အောငျ ထူးခွားလေးနကျ သှား တာလညျး ရှိပါတယျ။
မိမိ အတှကျ ဘာမြှျောလငျ့ခကျြမှ မထားဘဲ အရာရာကို ပေးဆပျရဲတဲ့ သတ်တိမြိုးရှိတဲ့ ပဌာနျးဆကျမြိုးလညျး ရှိပါတတျပါတယျ ။
ခွုံငုံပွောရရငျ ပဌာနျး ဆကျ အစဈအမှနျဆိုတာ ယဘေူယအြားဖွငျ့ ဒီလို ရှိတတျကွပါတယျ။
၁။ အတူ တကှ ကုသိုလျပွုလိုခွငျ။
၂။ မြှဝေ ခံစား နားလညျတတျခွငျး။
၃။ မိမိကွောငျ့ စိတျ အဆငျးရဲ မခံလိုခွငျး။
၄။ ဒုက်ခရောကျမှာ မလိုလားခွငျး ။
၅။ မိမိ ၏ ပူပငျသောက ကို မသိစလေိုခွငျး။
၆။ အခှငျ့အရေး မယူတတျခွငျး။
၇။ ဘဝ နထေိုငျမူ ပုံစံ တိုးတကျမွငျ့မားတာကို မွငျ လိုခွငျး။
၈။ မိမိ ပဌာနျးဆကျ ၏ ကောငျးသတငျးကိုသာ ကွားလိုခွငျး။
၉။ မိမိ ပဌာနျးဆကျ ၏ အကြိုးမဲ့ကို မပွုလိုခွငျး။
၁၀။မိမိ ပဌာနျးဆကျ ၏ အတငျးအဖငျြး ပွောဆိုမူကို မလိုလားခွငျး ။
၁၁။ မိမိ ပဌာနျးဆကျ ၏ စီးပှားရေး လူမူရေး ကနျြးမာရေး ပညာရေး မြားကို စိတျဝငျစားခွငျး
( အကြိုးမဲ့ စပျစုခွငျးမြိုးမဟုတျ)
၁၂။ မိမိ ပဌာနျးဆကျ ၏ စိတျသဘောထား အခွေ အနေ ။ ဘာသာရေး ယုံကွညျသကျဝငျမူ ။
ကုသိုလျပွုမူကို အလေးထား၏။ ကူညီ၏။
၁၃။ ဘဝ ပကျြခဲ့သညျ့တိုငျ တညျ့မတျပေး၏။ လကျတှဲချေါယူ၏။
ယခုတငျပွခဲ့သော အခကျြထကျလညျး မြားနိူငျ၏။ အဆိုပါ အခကျြမြားမှ တခုခု ခြှတျ ယှငျးခဲ့လြှငျ ကောငျးကြိုးလိုလားသော ပဌာနျး ဆကျမဖွဈနိူငျပါ။ သို့သျော ကောငျးသောအကွံဉာဏျလိုလား၍ မိမိ၏ ပူပငျသောကကို ပွောပွနခွေငျးမှာ အပူပေးခွငျးမဟုတျ။ စိတျသကျသာလို၍ အားကိုးအားထားပွုလို၍ ဖွဈ၏။ ခြှငျးခကျြဖွဈ၏။
သိုကျဆကျ ၊ ပဋ်ဌာနျးဆကျ ၊ ဘဝဆကျ ။ ။
သိုကျဆကျမြားသညျ သိုကျနနျးအတှငျးမှ ကတိကဝတျမြားဖွငျ့ လူပွညျ့သို့ သာသနာပွုရနျ ရောကျရှိလာကွသော ဘုမ်မိယအနှယျဝငျ သိုကျနနျးရှငျမြားဖွဈကွသညျ ။
ပဌာနျးဆကျမြားသညျ သိုကျနနျးရှငျမြား နှငျ့ အရငျဘဝကသျောလညျးကောငျး ယခုဘဝမှသျောလညျးကောငျး
မိဘ ၊ ညီအဈကိုမောငျနှမ ၊ သားသမီးအဖွဈ တျောစပျခဲ့ဖူး၍ သိုကျနနျးအတှငျးမှ သိုကျနနျးရှငျမြား က စောငျ့ရှောကျကွသော လူသားမြားဖွဈကွသညျ ။
ဘဝဆကျဆိုသညျမှာ သာသနာပွုရနျရညျရှယျခကျြဖွငျ့ သိုကျနနျးအတှငျးမှ လူ့ပွညျသို့ရောကျလာကွပွီး လူ့ပွညျတှငျသာသနာပွုလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျပွီး ကုသိုလျကောငျးမှုကံ ကွီးမားလှနျးသောကွောငျ့ သိုကျနနျးအတှငျးသို့ မပွနျရတော့ဘဲ လူဘဝကိုသာ တဈဖနျပိုငျဆိုငျခှငျ့ရသှားသော သာသနာပွုသူမြား ဖွဈကွသညျ ။ ။
စိတျလေးသလိုလို ကွကျသီးထသလိုလို ကွောခမျြးသလိုလို သညျ ပထမအဆငျ့ဖွဈပါတယျ။
နတျဝိဇ်ဇာမြားက ဆကျသှယျရနျကွိုးစားသျောလညျး မိမိသမာဓိက အားနညျးသေးသဖွငျ့ ဆကျသှယျမရသေးပါ။
ဘေးဖွဈမဲ့လမျးဆို စိတျလေးပွ။ ကံကောငျးမှာဆို ထူးခွားသောနိမိတျပွ။ နာမျလောက တဈစုံတဈဦး ရောကျလာလြှငျ ကွောစိမျ့ပွသညျ့ ပထမအဆငျ့သာဖွဈပါတယျ။
ဂုဏျတျောပှားတာ တရားထိုငျတာ အားကောငျးလာလြှငျ နတျဝိဇ်ဇာမြားက အိပျမကျဖွငျ့ဆကျသှယျနိုငျသောအဆငျ့ ရောကျလာပါတယျ။
အဓိဋ်ဌာနျဝငျဖို့ အိပျမကျပေးတာ ရှဖွေ့ဈမှာကို ကွိုတငျ အိပျမကျပေးတတျပါတယျ။
ပုဂ်ဂိုလျ သမထအစ အိပျမကျကလို့ ပွောရပါမယျ။
အာနာပါ သမထအစ နိမိတျကလို့ပွောရပါ့မယျ။
အိပျမကျပေးတာကို ခှဲခွားတတျဖို့လိုပါတယျ။ နယျစောငျ့နတျလို နတျကပေးတာလား။
မွနနျးနှယျတို့လို သိုကျကပေးတာလား စဈတတျဖိုလိုပါတယျ။
လမိုငျးက နတျဝိဇ်ဇာအယောငျဆောငျပွီး လိမျလညျ အိပျမကျ ပေးတတျပါတယျ။
မသုံးသပျတတျရငျ မစဈတတျရငျ အိပျမကျခိုငျးတာ လြှောကျလုပျ၊ အိပျမကျနဲ့မခိုငျးရငျ ဘာမှမလုပျနဲ့ ဘာမှမလုပျတတျ ခွာခွာလညျတတျပါတယျ။
အိပျမကျမှနျသမြှ အတညျယူလို့မရဘဲ ကိုယျပိုငျ အသိဉာဏျသာ အဓိက ဖွဈပါတယျ။
အကွားဓာတျနဲ့ အမွငျဓာတျ သတျသတျစီ လာတတျပါတယျ။
အကွားဓာတျပျေါရငျလညျး နတျဝိဇ်ဇာ သိုကျ ပွိတ်တာ နာမျလောကရဲ့ စကားပွောသံတှေ ကွားနရေတတျပါတယျ။
အမွငျဓာတျပျေါရငျလညျး ဒီသဈပငျမှာ ဘာရှိတာကအစ သိပွီး လူတယောကျကို ကွညျ့လိုကျတာနဲ့ သူ့ကိုယျစောငျ့နတျ အစောငျ့အရှောကျတှကေအစ မွငျနရေတတျပါတယျ။
သမာဓိအား အလှနျကောငျးမှ အကွား အမွငျ၂ခုလုံး ပွိုငျပျေါနတေတျပါတယျ။
ကိုယျ့ရှမှေ့ာ ဘိုးမငျးခေါငျ တငျပလ်လငျခြိတျ ဆေးလိပျသောကျပွီး စကားပွောနတောကို သကျရှိထငျရှားလို
အကွားအမွငျစဈစဈ အဆငျ့ဟာ နတျဝိဇ်ဇာတှနေဲ့ အပွနျအလှနျ စကားပွောလို့ ရတဲ့အဆငျ့ဖွဈပါတယျ။
သမာဓိအားကောငျးခြိနျမှာသာ ရတတျပွီး သမာဓိအားနညျးခြိနျ ပွုတျကသြှားတတျပါတယျ။
ဒါကို အကွားအမွငျ ဆကျတိုကျရနသေလိုလိုနဲ့ ဆကျလုပျနရေငျ လူတှကေို လိမျညာနတောသာ ဖွဈပါတယျ။
ဓာတျလိုလို နတျလိုလို ဘိုးတျောယောငျယောငျလို့ အပွောခံရတတျပါတယျ။
ဘိုးဘိုးအောငျ ဘိုးမငျးခေါငျ ဘိုးဝါယမတို့လို သိဒ်ဓိ(၁ဝ)ပါးအဆငျ့မရောကျဘဲနဲ့ ဘိုးတျောဝိဇ်ဇာ အမညျ
ယောဂီအဆငျ့ အကွားအမွငျယောငျယောငျလေးနဲ့ ဘိုးတျောလုပျနတောဟာ ဘိုးတျောလိမျမြားသာ
ဖွဈပါတယျ။ သိဒ်ဓိ(၁ဝ)ပါးပေါကျတဲ့ ဘိုးတျောအစဈတှကေ ရှားသှားပါပွီ။
ဒါကွောငျ့ နတျဝိဇ်ဇာတှနေဲ့ တကယျအဆကျအသှယျရတယျဆိုရငျ သမထလမျးစဉျ ဝိဇ်ဇာလမျးစဉျ
ညှနျကွားပွသတဲ့ ဆရာသမားမြိုး နဲ့ တှတေ့တျပါတယျ။ တှလေို့ လမျးစဈလမျးမှနျ လြှောကျနိုငျတဲ့သူက
လမျးခြျောသှားရငျ ခြဲဂဏနျးလာကျလေးပေးနိုငျရုံ ကွားသလို မွငျသလိုလိုနဲ့ လောဘသမားတှခွေံရံတဲ့
အဆငျ့နိမျ့သမထလောကျနဲ့ လမျးဆုံးတတျပါတယျ။ အာဘောငျအာရငျးသနျတဲ့ အကွှားဘိုးတျောအဆငျ့နဲ့ ဘိုးတျောအတုကို ဘယျနတျဝိဇ်ဇာမှာ မလေးစားပါဘူး။
နောကျဆုံး ညာစားပါမြားရငျ နတျဝိဇ်ဇာတှနေဲ့ ဆကျသှယျနိုငျတဲ့ အဆငျ့ကတောငျ ပွနျလြှောကသြှားတတျပါတယျ။
အဘိညာဉျမှလှဲရငျ အားအကောငျးဆုံးအဆငျ့ လို့ပွောနိုငျပါတယျ။ ထိုငျရာမထ စကားပွောရငျးနဲ့ နတျဝိဇ်ဇာတှနေဲ့ အခြိနျမရှေး ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
အထကျနတျ အောကျနတျ ဗွဟ်မာအထိ မနောခွငျးဆကျစကားပွောနိုငျပါတယျ။
စကားပွောတယျလို့ဆိုပမေဲ့ စိတျခငျြးပွော စိတျခငျြးနားလညျတဲ့ အဆငျ့ထိရောကျသှားပါတယျ။
ဝိဇ်ဇာတှနေဲ့ စိတျခငျြးဆကျသှယျပွီး အခြိနျမရှေး အလုပျလုပျရတတျပါတယျ။ စိတျခငျြးဆကျသှယျနိုငျတဲ့အဆငျ့ကလညျး တကယျပါရမီရှငျတှမှေ ရတတျပါတယျ။
တကယျသာသနာခဈြပွီး တရားကငျြ့မှလညျး နတျဝိဇ်ဇာတှကေ ခဈြခငျလေးစားပွီး စိတျမနောခငျြးဆကျသှယျနိုငျတဲ့ အဆငျ့ ရောကျတတျပါတယျ။
အားလုံးသာသနာကို ခဈြခငျမွတျနိုးပွီး တရားကငျြ့နိုငျကွပါစကွေောငျး ဆုမှနျကောငျးတောငျးလိုကျရပါတယျ။
credit to ပုပ်ပါး ဦးအောငျဓမ်မသိဒ်ဓိ